Game ကစားခြင်း၏ ကောင်းကျိုး ၊ ဆိုးကျိုး များ — MYSTERY ZILLION
Game ကစားခြင်း၏ ကောင်းကျိုး ၊ ဆိုးကျိုး များ
သူများတွေ နည်းပညာအကြောင်းတွေ အားရပါးရ ပြောဆိုဆွေးနွေးနေချိန်မှာ ကျွန်တော်က ဂိမ်းကစားခြင်းနဲ. ပါတ်သတ်လို.ဆွေးနွေးချင် သဗျ။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အခုဆိုရင် လူတိုင်းနီးပါးမှာ Android phone လေးတစ်လုံးစီလောက်တော့ ကိုင်နိုင်လာတဲ့ခေတ်ကိုးဗျ ။ အဲ လူတိုင်းရဲ. ဖုန်းတိုင်းမှာလဲ အနည်းဆုံး Candy Crashလောက်တော့ရှိကြမယ်ထင်တယ်ဗျ။ ဆိုတော့ အခုခေတ်မှာ ဆိုရင် Game ဆိုတဲ့ အရာက လူတိုင်းနဲ. မစိမ်းတော့ဘူး။ အားလုံးလဲ ယဉ်ပါး ကျွမ်းဝင်နေကြပြီ။ အခြေခံလူတန်းစားတွေမှ အစ ကွမ်းယာရောင်းရင်း ၊ ဆိုက်ကားဂိတ်မှာထိုင်နေရင်း ၊ ဈေးထဲမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းရင်း အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ ရသေ့စိတ်ဖြေပဲ ဆိုဆို၊ ကြိုက်လို.ပဲ ဆိုဆို ၊ အပြင်းပြေပဲပြောပြော ဂိမ်းလေးတွေ ဆော့နေကြတာကို နေရာအနှံ.မှာ တွေ.နေကြရတယ်ဗျ။
ကျွန်တော်တို. ဟိုတုန်းကဆို ဂိမ်းဆော့ချင်ရင် တစ်နာရီနှစ်ရာပေးပြီး ဆော့ဖို. P2 ဆိုင်ကိုပြေးရတာအမော။ အိမ်က လိုက်လိုက်ရိုက်တာလဲ အကြိမ်ကြိမ်။ ဟိုတုန်းက မိဘတွေဆို Game ဆော့တာကို တူးတူးခါးခါးမုန်းတီးကြတယ်ထင်တယ်။ ကျောင်းစာပျက်မယ် ၊ မျက်စိပျက်မယ် ၊ စိတ်လေမယ် စသည်.အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေပြပြီးတော့ပေါ့ဗျာ ။ ဒီတော့ အရာတိုင်းမှာ အကောင်းအဆိုးတော့ ရှိကြစမြဲဗျ။ သူ.ဟာနဲ.သူ ကောင်းတာလေးတွေတော့ ရှိကြစမြဲပေါ့ဗျာ ။ ဒီနေရာမှာ မိန်းကလေး ဦးရေနဲ. ယောကျာ်းလေးဦးရေနဲ. Game ကစားတာကို အချိုးချကြည်.ရင်ဖြင့် ဘယ်သူပိုများမလဲ အချိုးချကြည်.စရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်။ ဆယ်တန်းတုန်းက သင်ရတဲ့ Computers and Girls ဆိုတဲ့ Lesson ကိုသွားသတိရသေးဗျာ ။ အင်း ... ဂိမ်းဆိုင်မှာ မိန်းကလေးတွေ ထိုင်ဆော့နေပြန်တော့လည်း ကိုယ့်နှမသာဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ လို. ဟဲ ... ဟဲ ။ မိန်းကလေးတွေချည်းဆော့ကြတဲ့ ဆိုင်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ ။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်ထင်တယ် IT လောကမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြား နေတဲ့ ၊ နည်းပညာအသစ်အသစ်တွေကို တီထွင်နေတဲ့သူတွေ ၊ Programmer တွေ ကြားထဲမှာလည်း ယောကျာ်းလေး ဦးရေက ပိုများမယ်ထင်တယ်နော် ။ ဟဲ ... ဟဲ ရန်တိုက်တာပါ။
ဒီတော့ ကျွန်တော်သိသလောက် Game ကစားခြင်းရဲ. အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေအရင်ပြောကြည်.မယ်ဗျာ။
၁ ။ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုရရှိမယ်ဗျာ ။ ဗွီဒီယိုကြည်.တာ သီချင်းနားထောင်တာ စာအုပ်ဖတ်တာတွေနဲ. ယှဉ်ရင် ။ ဒါကတော့ကိုယ်ကြိုက်လို. ကိုယ်ပြောတယ်ပဲ ပြောမလားမသိဘူး။
၂ ။ Computer Game တွေဆော့မယ်ဆိုရင် ဥပမာ - DOTA ခုတ်တာတို.ဘာတို.ပေါ့ဗျာ ။ အဲ့တာဆိုရင် ကွန်ပျူတာနဲ.ပိုပြီး familliar ဖြစ်စေမယ်ဗျာ။
၃ ။ Game အများစုက English လိုတွေကများတော့ English skill ကိုတိုးတတ်စေမယ်ဗျ။
၄ ။ ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေးပိုပြီးထက်မြက်စေမယ်ဗျာ။
၅ ။ ကမ္ဘာမှာ ဂိမ်းကစားတဲ့သူတွေနဲ. ဂိမ်းမကစားတဲ့သူနဲ. ယှဉ်ရင် ဂိမ်းကစားတဲ့သူက ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှ တွေဝေမှု နည်းပါးတယ် ခင်ဗျာ။
၆ ။ အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှု ပိုမြင့်မားလာမယ်ပေါ့ဗျာ ... Shooting Game သမားတွေဖို.။
၇ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အင်အားတိုးတက်လာစေမယ်ဗျ ... Puzzle game တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါ ငါဆရာကြီးကွ ပေါ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဘယ်သူမှ မရှိလည်း proud ဖြစ်နေတာ။
၈ ။ နည်းပညာနဲ.ပါတ်သတ်လို. အသိအမြင် ၊ အတွေးအမြင် ၊ ဗဟုသုတတွေ တိုးတက်လာစေမယ်ဗျ ။ Scient fiction Game တွေဆော့သူများဖို.။
၉ ။ စိတ်ကူး၊စိတ်သန်း(Imagination skill) တွေပိုကောင်းလာမယ်ဗျ ။ City Building Game တွေလိုမျိုး ၊ Farm Game တွေလိုမျိုးပေါ့။
၁၀ ။ လူမှုဆက်ဆံရေးပိုတွင်ကျယ်လာမယ်ဗျ ။ အခု social Android Game တွေဆော့သူများ သိကြပါလိမ့်မယ်။
၁၁ ။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်အလိုက် ဗဟုသုတ တိုးလာမယ်ဗျာ ။ ဘောလုံးကစားတဲ့သူတွေက ဘောလုံးဂိမ်းဆော့သလိုမျိုး။ အတွက်အချက် ဝါသနာပါသူတွေက Puzzle Game တွေဆော့သလိုမျိုး။
၁၂ ။ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်း ၊ ခေါင်းဆောင်စွမ်းရည် (leader skill) ကို ပိုပြီး မြင့်တတ်လာစေတယ်ဗျာ ။ DOTA သမားတွေ Clan ခေါင်းဆောင်လုပ်သလိုပေါ့။
၁၃ ။ ဒီဇိုင်နာသမားတွေ ၊ Animation သမားတွေအတွက် လေ့လာအတုယူစရာတွေ ရသဗျာ။
စသည်စသည်ဖြင့် ကျွန်တော်သိသလောက် ချရေးလိုက်တယ်ဗျာ။
မကောင်းတဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိသေးတာပ ။ ဒါကတော့ ဂိမ်းမှ မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်အရာမဆို အတိုင်းအထက်လွန်လာရင်တော့ ဘယ်ကောင်းမလဲ ။ ကျောင်း ၊ သင်တန်း တွေပြေးပြီး သွားဆော့ရင်တော့ ကျွန်တော့်ညီ ၊ ညီမ ဆိုလည်း လိုက်ရိုက်ရမှာပဲ ။ အိမ်မှာ ဆိုလည်း အလုပ်လုပ်ပေးစရာ ရှိတာမလုပ်ပေးပဲ ဂိမ်းထိုင်ဆော့နေလို.ကတော့ အဆူအဆဲတော့ ခံရမှာပဲ ။
FaceBook မှာ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ် နေ.မှန်းမသိ ၊ ညမှန်းမသိ ဂိမ်းဆော့လွန်းလို. သေသွားတဲ့ ငတိ တစ်ယောက်အကြောင်း။ ကျွန်တော့်အနေနဲ. အကြံပေးချင်တာကတော့ အားတဲ့အချိန်လေး ပေါ့နော် ကိုယ်ကလည်း တစ်ခြားလုပ်စရာရယ်လို. ထူးထူးထွေထွေမရှိ ၊ အချိန်ကလည်းပေးနိုင် ၊ စားဖို.သောက်ဖို.လည်း မပူရ ၊ ဆူမယ့်သူလည်း မရှိ ၊ နောက်နေ.လည်း ရုံးမသွားရ ဆိုရင် ကိုယ်ကလည်း ဒါလေးကို ဝါသနာပါရင်တော့ ဆော့ပါလေ့။
ဒါပေမယ့် ဒါကြီးကို အလုပ်ကြီးတစ်ခုလို တရစေလုပ်နေလျှင်ဖြင့်ကျွန်တော်မှ မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်သူမှ မကြိုက်ကြဘူး။ DOTA ခုတ်ကြတဲ့ ပရိုတွေဆိုရင် တစ်လဘယ်လောက်ရတာ ဟုတ်ကဲ့ ပြောကြမလား ? သူတို.လို တစ်သက်လုံးလုပ်သွားကြဖို. တစ်ကယ်ရည်ရွယ်ပြီလား ။ လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီလား ?
အိုကေတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပြောစရာမရှိပါဘူး ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆို ကိုးတန်းစာမေးပွဲ final ဖြေတဲ့ ညတိုင်းကို ကျူ ရှင်ရှိတယ်ဆိုပြီး ဂိမ်းသွားဆော့တာ ညတိုင်း။
(အဖေတို. အမေတို. မမြင်ပါစေနဲ. ဒီပိုစ့်ကို) ။ နောက်တစ်ခု Second Life Game တွေကို ကိုယ့်မှာ စားဖို.သောက်ဖို.မပူရ ၊ ကျောင်းကလည်းပြီး ၊ ပိုက်ပိုက်ဝင်တဲ့ လုပ်ငန်းကလည်းရှိ ၊ အချိန်ကလည်း ပေးနိုင် ၊ မိဘ , ဇနီး မယားကလည်း ကြည်ဖြူ မှ အစလုပ်ဆော့ကြပါဗျာ ။ ဥပမာ -World of Warcraft လိုMMORPG second-life game မျိုး ။နို.မို. လူမှုရေး ပြဿနာတွေကြုံ ရမယ်ဗျ။ နောက်ပြီး ဒီလို ဂိမ်းမျိုးဟာ စွဲသွားရင် အပြင်ဘဝနဲ.ဂိမ်းထဲက ဘဝကို မကွဲတော့ဘူးဗျ ။ သတင်းတစ်ခုမှာ ဆို လူတစ်ယောက် ဂိမ်းထဲမှာ အရမ်းအောင်မြင်ကျော်ကြား ချမ်းသာတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိဘဝ မှာတော့ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အခါ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဘဝကိုယ်မကြေနပ်လို. သတ်သေတယ်လို. ဖတ်ရဖူးသေးသဗျာ ။
ရှဉ်.လဲ လျှောက်သာ ပျားလဲစွဲသာပေါ့ ဗျာ မယုတ်မလွန်လေး ဆော့ကြလျှင်ဖြင့် အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်လို.။
မှတ်ချက် ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဂိမ်းအလွန်ဆော့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း။